CNC Machining Service / Tora Online CNC Quote / Metal & Plastiki - Createproto Tech Co., Ltd.
BASA / CNC machine
Tsvaga yakanakira CNC yekumachina sevhisi yako epurasitiki nesimbi zvikamu, uye gadzira uye ununure pane-zvinoda.
Ipfupi kweComputer Numerical Control, CNC ndiyo michina yemuchina maturusi kuburikidza nemakomputa anoita pre-programmer software inoraira kufamba. CNC machine iri rakanakira rimwe-kure tsika zvikamu uye rinowanikwa mune machine chinenge chero chinogumbura zvinhu zvakananga maererano yenyu 3D CAD mashoko.
GadziraProto inopa CNC yekugaya, CNC kutendeuka, kuchera uye kubata zvinhu zvakasiyana siyana, senge simbi machining kana CNC ipurasitiki. Kurumidza-dzoka CNC machining inoshanda zvakanyanya kukurumidza prototyping, kuumba uye kukwana kuyedza, jigs uye zvigadzikiso, uye zvinoshanda zvikamu zvekupedzisira-kushandisa zvinoshandiswa.
CNC Prototype Machining Services muChina
CNC inokurumidza prototyping inoshandiswa kugadzira epurasitiki prototypes uye simbi prototypes, iyo inobvumidza yako dhizaini timu kunyatso kutevedzera yekupedzisira chigadzirwa kutaridzika uye basa, uye zvakare kuratidza iko kwechokwadi kweiyo muviri dhizaini nekureruka kana kuomarara gungano basa, uye zvakadaro ipa nzvimbo gadzirisa uye gadzirisa dhizaini.
With tsika-configured CNC azvikuya michina uye CNC wekutendeuka lathes, izvozvo nyore uye streamlines edu CNC machine pezvakaitwa. Yedu yepamberi CNC prototyping masevhisi anokurumidza mukuenderana nevatengi 'anodzvinyirira ekugadzira mashedhisheni uchikwanisa kubata mashandiro eakasiyana prototyping uye machining mapurojekiti anoda akakosha zvinhu, zvakaomarara zvikamu, uye zvakakwana kugona kwekugadzira kugona.
3-axis michina yekupfupisa kugadzirwa inomhanya kana zvidimbu zvidiki, inoshanduka 4, 5-axis CNC mashandiro emuchina masisitimu ezvakanyatso kugadzirwa zvikamu, uye yakagadziridzwa mafashama ebasa eNC kuronga uye chishandiso nzira, ese anoenda kupfuura echinyakare setups uye machining maitiro, uye tivimbise isu kuti ita yakaoma prototype machining mabasa nenguva. Dzidza zvimwe yedu yekukurumidza CNC prototyping, iwe unogona kurodha yemahara CAD faira ipapo.
Cnc Plastiki Yakagadzirwa Zvikamu
Kunyangwe pasina chirevo chaicho cheplastiki chaiyo machining, isu takaigadzirisa patiri nenzira kwayo uye nekudzokorora kuburitsa zvikamu zvakaoma maererano nejometri, kushivirira kwakanyanya, kujekesa kwemaziso uye kupedzisa kwakasiyana. CNC epurasitiki machine yakanyanya kusiyana nesimbi machining. Zvishandiso zvakasiyana zvinouya nematambudziko akasiyana, saka zvinoda imwe nzira maererano nesarudzo yezvishandiso, kumhanya parameter, uye epamberi ekugaya matekinoroji.
Kusangana nematanho aya kunoda michina yepamusoro, uye epamusoro mashini ekushandisa, maturusi uye vanocheka, kuronga kwakanaka uye kugadzirisa, ruzivo uye tsika yekungogamuchira mhando yepamusoro. Munguva yese yekugadzirisa mashandiro isu tinoitawo yakawandisa maitiro ekuongorora kuti mhando ivakwe mukati nekuchengetedzwa mune ese mativi. Isu tiri nyanzvi mune dzakasiyana-siyana nzira dzehunyanzvi uye nzira dzetsika epurasitiki machining.
CNC Simbi Yakavezwa Zvikamu
Kunze kwehupfumi ruzivo mukugadzira mapurasitiki epurasitiki, Createproto zvakare inopa simbi CNC yekushandisa sevhisi inosangana nechero rakaomarara dhizaini. Inosanganisira kutendeuka, kugaya, kuchera uye kurovera kwezvinhu zvakasiyana-siyana zvesimbi.
Zvizhinji zveCNC simbi zvikamu zvakagadzirwa nemhando dzakasiyana dzealuminium, magnesium alloy, zinc alloy, kabhoni simbi, simbi isina simbi, mhangura kana ndarira. Zvimwe simbi zvine maficha, senge mativi emakona emakona, zvinogona kunetsa kumuchina uye zvinogona kusanganisira kushandiswa kweEDM kana waya EDM.
Isu tinoongorora dhizaini yako uye tinogarisa chero akakosha mafixting uye machining maitiro anoshandiswa kugadzira zvikamu zvako pamutengo unonzwisisika. Isu tinokwanisa kuita zvechipiri mashandiro senge anodizing, kupenda, kuputira hupfu, kurapwa kwekupisa, kuputika kwejecha uye kupora. Nzvimbo yedu inopedzisa pazvikamu zveCCC kutsigira chinangwa chekushongedza chinogona kubvisa mamaki ekushandisa.
5-Sekaiichi CNC hwokugaya hwakabvira nezvaanogona
Kana zvataurwa muchina wepakati-5-akabatana muchina, inoreva kuwanda kwenzira dzinogona kufamba nesimbi yekucheka, kuti mushure mekumisikidza chishandiso chekucheka chinofamba ichiyambuka X, Y uye Z mitsara ine mitsetse uye inotenderera paA ne B mabadza, panguva imwe chete. azvikuya uye machine, uye yepamusoro pemvura machine psac kumugumo. Izvi zvinobvumira zvikamu zvakaoma uye zvakaoma kana zvikamu zvine mativi mazhinji zvinogona kugadziriswa kusvika kumativi mashanu echikamu mukumisikidza kumwe. Izvi zvinotsigira mainjiniya ekugadzira ekugadzira zvikamu zvine zvikamu zvine mamakisi akasimba anokwanisa kusimudzira mashandiro uye mashandiro echigadzirwa chekupedzisira pasina mashoma maitiro.
Sezvo zvikamu zvakawanda zvakagadzirwa muzvitoro zvemashopu zvinoda mashanu-mativi machining, 5-axis yekugaya uye zvemasevhisi masevhisi ari mukuda kukuru kwekushandisa kwakasiyana siyana mumaindasitiri akasiyana siyana anosanganisira eindasitiri yemuchadenga, indasitiri yekushambadzira, mota ichiratidzira maindasitiri pamwe nemaindasitiri ekugadzira magetsi . Machining mabhenefiti anosanganisira epamusoro-yepamusoro pevhu kupera, kumisikidza kurongeka, uye ipfupi kutungamira nguva uchigadzira iwo unoshamisa mukana wemabhizimusi mitsva mikana.
Zvakanakira 5-akabatana CNC azvikuya
Yakakwira-yepamusoro yepamusoro pedza: Zvinokwanisika kuburitsa yepamusoro-soro michina yekupedzisa zvikamu nekushandisa kweapfupi macheki ane yakakwira yekucheka kumhanya, iyo inogona kudzikamisa kudedera kunowanzoitika kana uchinge uchinge uchinge wakadzika maburi ane 3-axis maitiro. Inoita kumeso pamusoro kupera mushure mekugadzira.
Positioning kunyatsoita: 5-axis panguva imwe chete yekugaya uye machining zvave zvakakosha kana zvigadzirwa zvako zvapedza zvikaomerera kuhunhu hwakasimba uye kuita kwese. 5-axis CNC machine inobvisawo kudiwa kwekufambisa chidimbu chebasa pakati penzvimbo dzakawanda dzekushandira, nokudaro ichideredza njodzi yekukanganisa.
Ipfupi lead nguva: Iyo inovandudzwa kugona kweiyo 5-axis muchina inoguma yakaderera nguva yekugadzira, iyo inoshandura kuita ipfupi kutungamira nguva yekugadzira ichienzaniswa ne3-axis muchina.
Tsika yakaderera-vhoriyamu CNC machining ndeimwe yekuwedzera pakati pe prototyping uye kugadzirwa kwemazhinji, zvakanaka zvakagadzirirwa nzira yekuraira uye kuyedza kushambadzira. Kugadzira mumavhoriyamu akaderera muCNC michina zvakare imwe yakanaka yekugadzirisa mhinduro kune iri kuuya yakawanda yekugadzira purogiramu. Zvichienderana nechikonzero ichi, makambani mazhinji uye mazhinji anosarudza kushandisa yakaderera-vhoriyamu kugadzirwa nekuti inowana zvigadzirwa kumusika zvinokurumidza. Panguva imwecheteyo, zvakare inogona kugadzira imwe nzvimbo yekuvandudza pane zvigadzirwa zvichienderana nemhinduro yekushandisa.
Kubva kukurumidza kumumvuri kune yakaderera-vhoriyamu kugadzirwa, danho iri rave rekuvandudza maitiro muCCC machining maindasitiri nhasi. Izvo hazvigone chete kukurumidza kugadzirisa iyo michina kugona kwevakawanda vagadziri, asi zvakare inoderedza njodzi mukurerutsa dhizaini inochinja uye inochengetedza pane-yekugadzira nguva uye mutengo.
Iko kusanganiswa kwemidziyo yepamusoro uye neruzivo rusingaenzaniswi uye ruzivo rwevamiriri vedu vechikwata zvinotipa mukana wakakura kwazvo wepfupi yekumhanyisa zvigadzirwa.
Kweanopfuura makore, Isu takashandira vatengi kubva akasiyana maindasitiri nekugadzira mhando, chaiyo yekugaya zvikamu. Isu tinopa zvese tsika CNC prototyping masevhisi uye yakaderera vhoriyamu machining masevhisi nehunyanzvi hwedu hwehunyanzvi.
Isu tiri zvamazvirokwazvo yako-yekumira masevhisi muChina kune ako ese emuchina mapurojekiti. Kunyangwe iwe uchida zvikamu zvakapusa, zvakaoma zvikamu kana akati wandei akasiyana zvikamu, Gadziraproto yakamira newe kugadzirisa chero musanganiswa wezvikamu uye vhoriyamu.
GadziraProto's kugona kweCCC Machining Services
CreateProto ine CNC yekugadzira timu yemainjiniya ehunyanzvi uye machinists ekudzora ekugadzira redundancy, gadziridza CNC zvirongwa, kupfupisa nguva yekugadzirisa, kugadzirisa pamusoro, nekudaro tinogona kuona kuti zvikamu zvakagadzirwa zvichibuda nezvakanakisa zvigadzirwa zvigadzirwa, yedu yekugadzira timu iri kunyatsotevera ne yakatarwa standard kana zvasvika pakunaka uye kutarisisa kune zvakadzama.
Nyika-ye-iyo-3-axis uye 5-axis CNC michina iri kutsigira timu kuti ikurumidze kumhanya kweCCC epurasitiki machining uye CNC simbi machining zvakasiyana uye nekukurumidza, zvikamu zvese zvinogadzirwa pane edu ese-anazvo zvivakwa, izvo tipe kudzora kwakazara kubva dhizaini yekugadzira yedu CNC machining maitiro.
Cnc machine ndeimwe yemaitiro akaomesesa mukugadzira, kubva kumagadzirirwo ekubatanidza kusvika kumotokari uye munzvimbo yemuchadenga. Kugutsikana nevatengi vakasiyana siyana mumaindasitiri, CreateProto yakawana ruzivo rwakakura uye ruzivo rwakazara rwekugadzira zvikamu chaizvo sezvakakumbirwa nemutengi, uye akanzwisisa kukosha kwekutumira nguva. Ku CreateProto, unogona kuwana nekukurumidza kutendeuka kweCNC yekugadzira machining ye3-9 mazuva ebhizinesi.
Izvo iwe zvausingakwanise kuona zvine basa, paGadziraProto, kwete chete isu tinogadzira mhando dzemhando yepamusoro, asi isu zvakare takaratidza zviwanikwa zveCNC zvekupa manejimendi manejimendi kune vatengi vedu, ichipa mazano akakodzera pamusoro pekugadzirwa kwekugadzira, kubatsira yako dhizaini kubudirira pa nhanho yekutanga. Yedu projekiti manejimendi timu ndiyo yakanakisa pasirese. Kuzara kutonga kwekugadzira uye kugadzira zvinoreva kuti kune imwechete sosi yekuzvidavirira. Haufanire kuenda kumafekitori mazhinji kuti uwane rubatsiro rwaunoda. Uyezve, yedu-yekumira yakazara yevatengi system yekuchengetedza inotsigira yedu yekugadzira timu kuti vakwanise kuita basa ravo kuitwa nemazvo uye zvakakwana. Kana muine chero nyaya, tinoigadzirisa.
Kushivirira & Zvishandiso CNC machine Kushivirira
Kushivirira kwepamusoro kwekugadzira kunoshandiswa kuDIN-ISO-2768 (yepakati) yepurasitiki yakagadzirwa uye DIN-ISO-2768 (yakanaka) yesimbi dzakagadzirwa. Kazhinji, tinogona kubata machining shiviriro kubva +/- 0.005 "(+/- 0.125mm) kusvika +/- 0.002" (+/- 0.05mm). Chikamu chemaitiro chinokurudzirwa kuve chakakora kupfuura 0.02 "(0.5mm) mumatunhu ese uye chikamu chezita rakakora pamusoro pe0.04" (1.0mm) chinodiwa. Kana kushivirira kwakanyanya kuchidikanwa, ruzivo rwunofanirwa kuziviswa kuti zviyero zvipi zvinoda nzvimbo yakatetepa, kushivirira kwejometri kunogona kuiswa pamufananidzo wechikamu. Kushivirira kunokanganiswa zvakanyanya nechikamu geometry uye mhando yezvinhu. Vatariri vedu veprojekti vachabvunza newe pachikamu chimwe nechimwe cheprojekiti yako uye vachapa yakanyanya mwero kunyatsoita. Izvo zvakakosha kuti urambe uchifunga kuti kushivirira kwakasimba kunogona kukonzeresa kune imwezve mari nekuda kwekuwedzera kwezvimedu, yekuwedzera chigadziriso, uye / kana yakakosha ekuyera maturusi. Nzira yakanakisa yekushandisa kushivirira ndeye kungoshandisa yakasimba uye / kana geometric shiviriro kunzvimbo dzakakomba, izvo zvinobatsira kudzikisa mutengo.
Cnc Machining Chinyorwa Sarudzo
ABS - (Natural / Nhema / Moto Unodzora)
PC / Polycarbonate - (Yakajeka / Nhema)
PMMA / Acrylic - (Yakajeka / Nhema)
PA / Nylon - (Natural / Nhema / 30% GF)
PP / Polypropylene - (Natural / Nhema / 20% GF)
POM / Acetal / Delrin - (Dema / Chena)
Epoxy Tooling Bhodhi
Kubatsira & Kunyorera
Kusarudzwa kwakawanda kwezvinhu, hapana chikonzero chekukanganisa nezvinhu zvakasvibirira nekuti zvikamu zvinogona kuve zvakagadzirwa neCCC zvakananga kunze kweinjiniya mapurasitiki nesimbi.
Yakanyatso kurongeka uye inodzokororwa, CNC machining inobvumidza yakakwira kunyatsoita uye yakanakisa pamusoro pekupedzisa uye / kana ruzivo.
Kutsanya kutendeuka, michina yeCCC inogona kushandiswa maawa makumi maviri nemasere zuva nekuenderera, ichingodzimwa kuti igadziriswe.
Zvehupfumi zvekupfupika kumhanya kwezvigadzirwa zvikamu zvinoda akasiyana siyana mashandiro kuti aitwe. Mavhoriyamu anokwenenzverwa kubva kune imwe kusvika zviuru zana.
Prototypes kazhinji akakura uye makuru zvikamu zvine hupfumi neCNC prototyping zvichienzaniswa nekukurumidza prototyping maitiro nekuti mazhinji eRP zvivakwa zvinhu zvinodhura.
Prototype Machining Zvikumbiro
Mifananidzo yekuona (Concept kana Exhibit)
Kugadzira-Giredhi Plastiki Prototypes
Prototyping Oversized Zvikamu
Fixtures & Zvishandiso
Masoko Ekudzidza Masika
Inokurumidza Prototyping Uye Kugadzira, Kurumidza Prototyping, 3d Kudhinda & Rapid Prototyping Services, Kukurumidza Prototyping, Cnc Kuchengetedza, Cnc Rapid Prototyping,